အကောင်းဆုံးဇိမ်ခံကားတစ်စီးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ ကိုယ်တိုင်မမောင်းဘဲ နောက်ခုံမှာ ဇိမ်အကျဆုံးလိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ဟာ ဇိမ်ခံကားကောင်းတစ်စီးအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ။ Cadillac CT6 ကတော့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိလှတဲ့ full size luxury sedan ဖြစ်ပြီး နောက်ခုံမှာ လိုက်ပါစီးနင်းမယ့်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်တော့ ကြီးမြင့်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း : $250,000 (Yangon License နှင့် Income Tax မပါ)
2018 model ဖြစ်နေခြင်း
“ကားတစ်စီးကို ကိုယ်တိုင်မမောင်းဘူး။ ကားမောင်းတာထက် ပိုပြီးဦးစားပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကို ကားပေါ်မှာပဲ ဇိမ်ကျကျစီးနင်းရင်းလုပ်ဆောင်မယ့်သူတွေအတွက်တော့ Cadillac ရဲ့ CT6 ဟာ အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံး ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေမှာပါ။”
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဇိမ်ကျကျမောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း CT6 ဟာ ခန့်ခန့်ညားညားမောင်းနှင်စရာ အကောင်းဆုံးကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ Cadillac CT6 2018 မှာမြင်မြင်ခြင်းရင်ထဲရောက်စေတဲ့အချက်တွေကတော့ လူငါးယောက်အတွက် ဇိမ်ကျကျနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးနင်းနိုင်ခြင်း၊ ရုန်းအားကောင်းမွန်ခြင်း၊ အရွယ်အားဖြင့်ကြီးမားသော်လည်း လျင်လျင်မြန်မြန်ဖြင့် သွက်သွက်လက်လက်မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် နောက်ယက်ဖြစ်သော်လည်း လိုအပ်ပါက AWD သို့အလိုအလျောက်ကူးပြောင်းပေးနိုင်ခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ခေတ်ရှေ့ပြေးသောနည်းပညာများစွာပါဝင်ခြင်း၊ ထိုင်ခုံတွင်အသုံးပြုထားသော leather သည်ထိုင်၍ဇိမ်ကျလှပြီး လူအရွယ်အစားမျိုးစုံအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားခြင်း၊ Apple CarPlay နှင့် Android Auto နှစ်မျိုးစလုံးအသုံးပြုနိုင်ခြင်း စတာတွေပါ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် Cadillac CT6 ဟာ အားနည်းချက်ရှာရခက်ခဲတဲ့ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ 2018 model ဖြစ်နေခြင်းနဲ့ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းရဲ့နောက်မှာ ဆီစားနှုန်းမြင့်မားခြင်းဟာ အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကားမျိုးစီးပြီဆိုမှတော့ ထိုက်သင့်တဲ့လောင်စာဆီဖိုးတော့ အကုန်အကျခံနိုင်မယ့်သူတွေချည်းဖြစ်နေမှာပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော၊ ရုန်းအားကောင်းသော၊ smart ကျသော၊ ကျော့ရှင်းလှပသော စတဲ့ နာမဝိသေသနတွေထက်စာရင် Cadillac CT6 အတွက် ကျက်သရေရှိပြီးခန့်ညားတယ်ဆိုတာကပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
“Cadillac ရဲ့ CT6 နဲ့ဆိုရင် တော်ရုံလူတောင်မှ gentleman တစ်ယောက်ဖြစ်သွားမှာပါပဲ။”
အတွင်းခန်းကို ဝင်ဝင်ခြင်းသတိပြုမိတာကတော့ အထူးဇိမ်ကျတာပါပဲ။ Cadillac CT6 ဟာယာဉ်မောင်းသူအတွက်သာမဟုတ်၊ ယာဉ်မောင်းသူဘေးထိုင်ခုံသာမဟုတ် နောက်ခုံမှာ လိုက်ပါစီးနင်းမယ့်လူအတွက်လည်း အထူးသက်သောင့်သက်သာရှိလှတာတွေ့ရပါတယ်။ ထိုင်ခုံတွေရဲ့ပုံစံနဲ့ ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ အကောင်းစားသားရေသားတွေဟာ ဝင်ထိုင်လိုက်သူ ဘယ်လိုလူမျိုးအတွက်ကိုမဆို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားပြီး ထိတွေ့မှုအပိုင်းအရလည်းတော်တော်လေးကောင်းမွန်တာတွေ့ရတယ်။
“Cadillac CT6 ဟာ တစ်ခြားနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ BMW7Series ၊ Mercedes S Class တို့နဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ model ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တော့ Cadillac ဟာ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံအပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားကားအမျိုးအစားပါ။ ဘယ်ကားနဲ့မှမတူပါဘူး။”
“Cadillac ရဲ့ design language မှာ အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ကားရဲ့အတွင်းအပြင် အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများကို Cadillac အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အချိုးအတိုင်း ပြုလုပ်ပေးထားတာပါပဲ။ ကားရဲ့ grille ၊ bonnet ၊ engine cover ၊ dashboard ၊ infotainment screen ၊ gear knob ၊ ထိုင်ခုံတွေရဲ့ဒီဇိုင်း အားလုံးဟာ Cadillac အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အချိုးအတိုင်း ပြုလုပ်ထားတာဟာ တကယ့်ကို royal ပါပဲ။”
ရှေ့နောက် dual zone air conditioning ၊ အသံအတိုးအကျယ်အတွက် touch bar ပါဝင်ပြီး ပုံထွက်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ တုံ့ပြန်မှုမြန်ဆန်ခြင်းအရည်အသွေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ 10.2-inch infotainment မျက်နှာပြင်၊ ရှေ့အတွက်ရောနောက်အတွက်ပါဖွင့်နိုင်တဲ့ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ sunroof ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ HUD ၊ အဝေးပြေးလမ်းမတွေပေါ်မှာ ယာဉ်မောင်းသူကို အကောင်းဆုံးအကူအညီပေးမယ့် adaptive cruise control ၊ 360 ကင်မရာ၊ ဖန်သားပြင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး wide-angel ကိုမှ HD အရည်အသွေးနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် နောက်ကြည့်မှန်၊ မှန်ကန်တိကျတဲ့ blind spot detection ၊ ထိုင်ခုံတွေသာမက steering adjustment ကိုပါ motor တပ်ဆင်ပေးထားခြင်း၊ ဒူးကာအပါအဝင် လေအိတ်ပတ်လည် ၁၀ လုံး၊ ဖုန်းထားစရာနေရာမှာကောင်းမွန်ပြီး wireless charging ပါအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ teen driver mode ပါဝင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကို ပေးစီးရာမှာ အမြန်နှုန်းကို လိုသလိုကန့်သတ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ parking ပိုင်းအတွက် parking alert ၊ Automatic parking assist အပြင် auto parking ပါ လိုသလိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ Tour/Sport အပြင် Snow/Ice mode များပြောင်းလဲမောင်းနှင်နိုင်ခြင်း၊ lane departure assist ပါဝင်ခြင်း၊ auto brake assist ပါဝင်ခြင်း စသည်ဖြင့် ယာဉ်မောင်းသူနှင့် စီးနင်းလိုက်ပါသူအားလုံးကို အပြည့်အဝအကူအညီပေးပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေမယ့် ခေတ်မီကရိယာတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထူခြားချက်အဖြစ် မိမိရဲ့ကားဂိုဒေါင်မှာ remote အဖွင့်/အပိတ် တပ်ဆင်ထားပါက ကားတွင် တစ်ပါတည်းပါဝင်တဲ့ခလုတ်မှာ ထည့်သွင်းပြီး remote မလို ကားမှခလုတ်ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်တာကတော့ တကယ်ကို သဘောကျစရာကောင်းလှပါတယ်။
လက်တွေ့ပိုင်းအရ Cadillac CT6 ကိုအခြားကားတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မပြချင်ပါဘူး။ အတွင်း ရှေ့နောက် ထိုင်ခုံတွေရဲ့ ကျယ်ပြောပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိမှုတွေနဲ့ နောက်ပစ္စည်းထားခန်းဧရိယာ များပြားမှုတွေဟာ CT6 အတွက်ဆိုရင် အခြေခံအနေနဲ့တောင်မှ ပါဝင်နေလို့ပါပဲ။
“လက်တွေပိုင်းအရ အမေရိက ကနေတိုက်ရိုက်တင်သွင်းထားတဲ့ကားဖြစ်သလို အမေရိက သမ္မတအဆက်ဆက်အတွက် ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ အမေရိကနိုင်ငံတော်အမှတ်တံဆိပ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ Cadillac အမှတ်တံဆိပ်ပီသစွာ လူကြီးလူကောင်းဆန်စွာ စီးနင်းမောင်းနှင်နိုင်မယ့် ရှားရှားပါးပါး ကားတစ်စီးလို့သာဆိုချင်ပါတယ်။”
Cadillac CT6 2018 ကို နိုင်ငံတကာမှာတော့ Base ၊ Luxury ၊ Premium Luxury ၊ Plug-In နဲ့ Platinum ဆိုပြီး trim level ငါးမျိုးနဲ့ရွေးချည်ဝယ်ယူနိုင်ပေမယ့် အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ trim ကတော့ Premium Luxury trim ပါ။ အမြင့်ဆုံး trim ဖြစ်တဲ့ Platinum နဲ့အကြမ်းဖျင်းကွာခြားချက်ကတော့ Platinum မှဆိုရင် ပိုပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့ နောက်ထိုက်ခုံတွေရယ် super cruise control ရယ်နဲ့ steering မှာ indicators တွေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုရရှိနိုင်တဲ့ Premium Luxury မှာတော့ 3.6-litre V6 အင်ဂျင်နဲ့ဖြစ်တာမို့လို့ ဆွဲအားရုန်းအားမကောင်းစရာ ဘာအကြောင်းမှရှိနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမြင့်ဆုံးပါဝါထုတ်လွှတ်မှုအနေနဲ့ 335-hp အထိတောင်မှ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ twin-turbo 3.0-liter V6 အင်ဂျင်နဲ့ဆိုရင် အမြင့်ဆုံးပါဝါထုတ်လွှတ်မှု 404hp အထိတောင်မှ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီအင်ဂျင်ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့မရတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ 3.6-litre V6 အင်ဂျင်နဲ့ဆိုရင် ဆီစားနှုန်းကတော့ 7.6 - 11.5 km/L လောက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
“ဘယ်လိုပဲပြောပြော အားကောင်းလှတဲ့ V6 အင်ဂျင်ရယ်၊ eight-speed automatic transmission နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Cadillac ရဲ့ CT6 ဟာ မောင်းနှင်ရာမှာလည်း ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိလှတာ တွေ့ရသလို မြန်နှုန်းမြင့်မောင်းနှင်ဖို့အတွက်လည်း တည်ငြိမ်စွာနဲ့မောင်းနှင်နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။”
Speaker ရှစ်လုံးရဲ့အသံထွက်ပိုင်းအထူးကောင်းမွန်တာကတော့ မြင့်မားတဲ့မြန်နှုန်းတစ်ခုမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မောင်းနှင်တာကို စီးနင်းရင်း Jazz သီချင်းတွေကို တိုးတိုးလျလျနဲ့ ပီပီသသနားဆင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် အကောင်းဆုံးဇိမ်ကျမှုတစ်ခု ရရှိနိုင်တဲ့အထိပါပဲ။
Front shoulder room: 58 "
Rear shoulder room: 56 "
Front hip room: 56 "
Rear hip room: 54 "
Luggage capacity: 15.3 Cu.ft.
Maximum cargo capacity: 15.3 Cu.ft.
Length: 204.1 "
Body width: 74.0 "
Body height: 58.0 "
Curb: 3,925 Lbs.
Gross weight: 5,026 Lbs.
Horsepower rpm: 6,800
Torque rpm: 5,300